Allgedo.com » 2012 » July » 07
Home » Archive Daily July 7th, 2012 Ahlu-sunna oo ku han jabtay in dhawaan ay la wareegeyso degmada Dhuusa Mareeb ee gobalka Gal-gaduud. Jul 7, 2012 Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefoow oo ah gudoomiyaha gudiga Fulinta Ahlu-sunna Waljameeca oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay rabaan dhawaan inay duulaan ku qaadaan degmada Ceel-buur.
“Waxaan isku raacnay anaga iyo ciidamada garabka nasiinaaya ee Itoobiya inaan dhawaan dib ugu laabano degmada Ceel-buur ee gobalka Gal-gaduud waayo dadkii shacabka ahaa ayaa lagu dhibaateeyay.”
Gudoomiyaha... Diyaarado dagaal oo duqeeyay gaadii day la socdeen ciidamo ka mid ah Xarakada Al-shabaab. Jul 7, 2012 Diyaarado dagaal oo aan la ogeen dalka laga leeyahay ayaa maanta duqeeyay gaadiid ay la socdeen ciidamo ka mid ah Xarakada Al-shabaab xilli ay maraayeen deegaan ka mid ah J/hoose.
Gaadiidka ayaa la sheegay in gabi ahaan uu halkaasi ku bas beelay waxaana qasaaraha halkaa ka dhashay kasoo kala baxaaya warar Is khilaafsan.
Saraakiisha dowladda TFG ee J/hoose ayaa saxaafadda u sheegay in halkaa ay ku... Wariye ka mid ahaa shaqaalaha UNIVERSAL TV oo maqribnimadii caawa Muqdisho lagu dhaawacay. Jul 7, 2012 Rag ku hubeesan bistoolado ayaa maqribnimadii caawa waxa ay dhaawaca u geesteen wariye ka mid ah shaqaalaha UNIVERSAL TV ee Magaalada Muqdisho oo lagu magcaabo C/qaadir Cumar Cabdulle, waxaana lagu ay ku dhaawaceen xaafad ka mid ah degmada Wadajir.
Ragaan wariyaha dhaawacay ayaa la sheegay 3 qof inay ahaayeen islamarkaana ay isku dayeen inay dilaan laakiin uu halkaasi ku dhaawacmay, waxaana waxyeelo... Askari ka mid ah dowladda KMG oo lagu dilay degmada wardhiigleey ee magaalada Muqdisho. Jul 7, 2012 Rag Bistoolado ku hubeysan ayaa maanta degmada Wardhiigleey ee Magaalada Muqdisho waxay ku fileen askari ka mid ah dowladda KMG xilli uu shaqo maalmeedkiisa ku guda jiray.
Askarigaan ayaa suuq ku yaala xaafadda Laba dhagax waxa uu ka qaadaayay Lacagta canshuurta laakiin waxaa gadaal kaga yimid dhalinyaro Bistoolooyin wata oo halkaasi ku toogtay.
Dilka ka dib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka mid... Ciidamada dowladda TFG oo maalintii sedaxaad howlgalo ka sameeyay Magaalada Muqdisho. Jul 7, 2012 Ciidamada dowladda KMGS ayaa maalintii sedaxaad waxay howlgalo dad lagu soo qab qabtay ka sameyeen degmooyin ka mid ah magaalada Xamar.
Cidamadaan ayaa isugu jiray Xooga dalka. Nabad Sugid, AMISOM iyo Booliis waxaana la qabtay dad tiro ahaan lagu sheegay 200 oo qof.
Saraakiisha dowaldda ayaa sheegaaya in dadkaan la qabtay dhamaantood baaritaan la wada marsiin doono cidii dambi lagu helana maxkamad... Radio Allgedo/ Waraysiyo